Khulisa | Zeevou
Ngakho-ke unebhizinisi lokungenisa izihambi, futhi ubheke ukulikhulisa. Uqala ngaphi? Siphakamisa ukuthi uqale ngezisekelo. Vumela uZeevou i-automate imisebenzi yakho ejwayelekile ukuze ukwazi ukugxila kokusemqoka. Sebenzela ibhizinisi lakho, kunokuba ungene kulo. UZeevou angasiza kanjani ngalokhu? Senze izici ezahlukahlukene ezikuvumela ukuthi ukhulise inzuzo yakho ngeyunithi ngayinye, ngenkathi ikusekela njengoba ukhuphula inani lamayunithi owasebenzisayo.
IZeevou ingangisiza kanjani ngikhule?
Okokuqala, kuzodingeka uqiniseke ukuthi unciphisa ubungozi bamazinga okuhlala aphansi. Ukusiza ngalokhu, sikwazi ukuxhumeka ngesikhathi sangempela nenani elikhulu leziteshi. Ungakhathazeki: futhi sakha ngezici ukuqinisekisa ukuthi isikhathi sakho somlawuli asichithwa ekugcinweni kwerekhodi. Usebenzisa iZeevou, ungalandela kalula ukuthi ukubhuka ngakunye kuzokubiza malini kuma-commissions. Isoftware yethu esezingeni eliphakeme ikuvumela ukuthi uphinde uthengise ubusuku bakho ngenkathi ulinde ukukhanselwa okulindile kunoma iyiphi i-OTA ukuthi ixazululwe ngokuphelele.
Qoqa ama-imeyili wangempela
Lapho usuthole imikhondo yakho, siyazi ukuthi akukho okubaluleke ngaphezu kokuzinakekela. Kungakho, noma ama-OTA enza kube nzima ngawe ukuthi wakhe i-database yakho yezivakashi ongamaketha kuzo, sinomhlane wakho! Inqubo yethu yesiqinisekiso sokubhukha esinezinyathelo ezi-5 iqinisekisa ukuthi uqoqa amakheli we-imeyili wangempela wazo zonke izivakashi zakho.
Shayela Ngokuqondile Ukubhuka
Ngaphezu kwalokho, ukukusiza ukuthi ukhulise amazinga okuhlala kwakho ngenkathi unciphisa amakhomishini wakho we-OTA, sikunikeza iwebhusayithi enhle, enobungani be-SEO, yesimanje ukuze uthole ukubhukha okuqondile kugeleze futhi kwandise inzuzo yakho.
IZeevou ingangisiza kanjani ukuphatha ukukhula kwami?
Izinhlelo Ezakhelwe Isikali
Akunasidingo sokukhathazeka ngokukhula kude kakhulu noma ngokushesha okukhulu. IZeevou ikuvumela ukuthi uphathe abatshalizimali bakho, ubanikeze ukufinyelela ekubikeni kwesikhathi sangempela ngenkathi uZeevou enakekela ama-akhawunti akho kanye nokwahlukana kwenzuzo. Jabulela inkululeko ephelele yokucaciswa ngayo yonke ithempulethi yokuthengiselana, noma gcina isikhathi ngokusebenzisa efanayo ezintweni eziningi. Isici sethu sokungezwa kwesilinganiso senqwaba sikuvumela futhi ukuthi usethe amanani ezinhlotsheni eziningi zamayunithi ngesikhathi esisodwa.
Ukufinyelela komsebenzisi okungenamkhawulo
Ngezinga elikhulu kuza abasebenzi abaningi. Kepha leyo akuyona inkinga uma usebenzisa iZeevou. Unganikeza amazinga ahlukahlukene okufinyelela kubasebenzi njengoba kudingeka, noma wakhe amaphrofayili enkampani uma ukhipha umsebenzi wakho. Khulisa iqulu lakho losonkontileka, abagcini bezindlu, nabasizi bangempela, ngaphandle kokuyekethisa ekuphathweni kwabasebenzi bakho.
Buka ibhizinisi lakho linabela kwamanye amadolobha, nakwamanye amazwe. IZeevou izokwenzela ngokuzenzakalela amakhalenda wokuhlalwa kwamayunithi amaningi, futhi izokuvumela ukuthi uphathe emazweni amaningi ngemali efanele.